Paul's 1st Letter to the Corinthians – 2माछा
घर / बाइबल / Epistles / Paul's 1st Letter to the Corinthians
1:1 पावलले, परमेश्वरको इच्छा द्वारा येशू ख्रीष्टको प्रेरित भनिन्छ; र Sosthenes, एक भाइ:
1:2 कोरिन्थका छ जो परमेश्वरको चर्च, ख्रीष्ट येशूमा पवित्र ती, तिनीहरूको को र हाम्रो हरेक ठाउँमा हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा लागू भएका सबै सन्तहरू हुन भनिन्छ.
1:3 हाम्रा पिता परमेश्वर तपाईंले र प्रभु येशू ख्रीष्टको देखि ग्रेस र शान्ति.
1:4 म लगातार किनभने ख्रीष्ट येशूमा तपाईँलाई दिइएको छ कि परमेश्वरको अनुग्रहको लागि मेरा परमेश्वर धन्यवाद दिन.
1:5 कि अनुग्रह द्वारा, सबै कुरामा, तपाईं उहाँमा धनी भएका छन्, हरेक शब्द र सबै ज्ञान.
1:6 अनि त, ख्रीष्टको गवाही तपाईंलाई बलियो गरिएको छ.
1:7 यसरी, केही कुनै पनि अनुग्रहको तिमीहरूलाई कमी, तपाईं हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रकाश जसै.
1:8 उहाँले र, पनि, तपाईं बलियो हुनेछ, पनि अन्त सम्म, दोषी बिना, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमन को दिन सम्म.
1:9 परमेश्वरको विश्वासी छ. उहाँमार्फत, तपाईं आफ्नो पुत्रको संगति मा भनिन्छ गरिएको छ, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको.
1:10 अनि त, म तपाईंसँग प्रार्थना गर्छु, भाइहरूले, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा द्वारा, भनेर हरेक एक नै तरिका बोल्न, र तपाईं बीच कुनै schisms हुन कि. त्यसैले तपाईं सिद्ध हुन सक्छन्, एउटै मन संग र एउटै न्याय संग.
1:11 यसलाई मलाई संकेत गरिएको छ, तिम्रो बारेमा, मेरा दाजुभाइहरु, Chloes संग भएकाहरूलाई द्वारा, तपाईं बीच contentions छन् कि.
1:12 अब म प्रत्येक भन्दै किनभने यो भन्न: "निश्चय, म पावलको हुँ;"" तर म अपोलो को हुँ;"" साँच्चै, म Cephas को हुँ;"साथै: "म ख्रीष्टको हुँ।"
1:13 ख्रीष्टको विभाजित गरिएको छ? पावलले लागि क्रूसमा थियो? वा तपाईंले पावलको नाउँमा बप्तिस्मा?
1:14 म तपाईं को कुनै पनि बप्तिस्मा गरेको परमेश्वर धन्यवाद दिन, क्रिस्पस र गायस बाहेक,
1:15 जो कोहीले नत्र भन्न तिमी मेरो नाउँमा बप्तिस्मा गरिएका.
1:16 र म पनि Stephanus को घरेलू बप्तिस्मा. यी भन्दा अन्य, म कुनै पनि अरूलाई बप्तिस्मा यदि म छैन.
1:17 ख्रीष्टको बप्तिस्मा मलाई पठाउन गरे, तर evangelize गर्न: छैन शब्दहरूको बुद्धि मार्फत, ख्रीष्टको पार नत्र खाली बन्न.
1:18 क्रुसको वचन लागि पक्कै पनि ती मूर्खता गर्ने डरावना हो. तर ती जो सुरक्षित गरिएको छ, छ, हामीलाई, यो परमेश्वरको शक्ति हो.
1:19 लागि यो लिखित गरिएको छ: "म बुद्धिमानी को बुद्धि नष्ट हुनेछ, र म चतुर को विवेकले अस्वीकार गरिनेछ। "
1:20 जहाँ बुद्धिमानी हो? शास्त्री कहाँ छन्? यस उमेर को सत्य खोज्नेहरूको कहाँ छन्? परमेश्वरको मूर्खता मा यस संसारको बुद्धि गरेको छैन?
1:21 लागि विश्व बुद्धि मार्फत परमेश्वरले थाहा थिएन, र त्यसैले, परमेश्वरको बुद्धि मा, यो विश्वासीहरूको मुक्तिको पूरा गर्न परमेश्वरले खुसी, हाम्रो प्रचार मूर्खता मार्फत.
1:22 यहूदीहरूले लागि संकेत माग्न, र युनानी बुद्धि खोज्न.
1:23 तर हामी ख्रीष्टको प्रचार गर्दै क्रूसमा. पक्कै पनि, यहूदीहरूलाई, यो एक घोटाले छ, र अन्यजातिहरूको गर्न, यो मूर्खता हो.
1:24 तर ती जो भनिन्छ गरिएको छ, यहूदीहरूले साथै युनानी, ख्रीष्टको परमेश्वरको सद्गुण र परमेश्वरको बुद्धि छ.
1:25 के परमेश्वरको मूर्खता मानिसहरूले बुद्धिमानी मानिन्छ छ लागि, र जो परमेश्वरको कमजोरी मानिसहरूले बलियो मानिन्छ छ.
1:26 त्यसैले आफ्नो व्यक्तिको पेशा हेरविचार, भाइहरूले. छैन लागि धेरै शरीरका अनुसार बुद्धिमानी हो, धेरै छैन शक्तिशाली छन्, धेरै छैन महान छन्.
1:27 तर परमेश्वरले संसारको मूर्ख चाहनुभएको छ, उहाँले बुद्धिमानी confound सक्छ भनेर. अनि परमेश्वरले संसारको कमजोर चाहनुभएको छ, उहाँले बलियो confound सक्छ भनेर.
1:28 र परमेश्वरले ignoble र संसारको अधम चाहनुभएको छ, केही भएकाहरूलाई, उहाँले केही गर्न कम हुन सक्छ भनेर ती जो कुरा हो.
1:29 त्यसैले त, आफ्नो दृष्टि मा शरीरका गर्नुपर्छ महिमा को हो भनेर केही.
1:30 तर तपाईं ख्रीष्ट येशूको उहाँलाई को हो, हाम्रो बुद्धि र न्याय र पवित्रीकरण र छुटकारा हुन परमेश्वरले जो थियो.
1:31 अनि त, यस्तै मा, यो लेखिएको थियो: "जसले Glòries, प्रभु महिमा गर्नुपर्छ। "
2:1 अनि त, भाइहरूले, जब म आए, तपाईं ख्रीष्टको गवाही घोषणा, म उच्च शब्दहरू वा उच्च बुद्धि ल्याउन थिएन.
2:2 म न्याय गरेनन् आफैलाई तपाईं बीचमा केही थाहा गर्न, येशू ख्रीष्ट बाहेक, र उसलाई क्रूसमा.
2:3 र म कमजोरी तपाईं संग थियो, र डरले, र धेरै कामेको संग.
2:4 र मेरो शब्द र प्रचार गर्न मानव बुद्धिको प्रेरक शब्दहरू थिए, तर आत्मा को र सद्गुण देखाउनुभएको थियो,
2:5 भनेर आफ्नो विश्वास मानिसहरूको बुद्धिमा आधारित हुन छैन, तर परमेश्वरको सद्गुण मा.
2:6 अब, हामी सही बीचमा बुद्धि बोल्न गर्छन्, अझै साँच्चै, यो यस उमेर को बुद्धि छैन, न त यो उमेर को नेताहरूको कि, जो केही कम गरिनेछ.
2:7 बरु, हामी लुकाइएको छ जो एक रहस्य परमेश्वरको बुद्धिको कुरा, जो परमेश्वरले हाम्रो महिमा लागि यो उमेर अघि पूर्वनिर्धारित,
2:8 यो संसारको नेताहरूको कुनै पनि ज्ञात छ कि केहि. यदि तिनीहरूले ज्ञात थियो लागि, तिनीहरूले महिमा को प्रभु कहिल्यै क्रूसमा थियो.
2:9 यो लिखित गरिएको छ रूपमा तर यो सिर्फ छ: "आँखा देखेको छैन, र कान सुनेको छैन, न त यो मानिसको हृदय मा प्रवेश गरेको छ, के कुरा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका लागि तयार छ। "
2:10 तर परमेश्वरले आफ्नो आत्मा हामीलाई यी कुराहरू प्रकट गरेको छ. आत्मा को लागि सबै कुरा खोजी, परमेश्वरको पनि गहिराइमा.
2:11 र मानिसको छन् कि कुरा गर्ने थाहा गर्न सक्नुहुन्छ, कि मानिस भित्र छ जो आत्मा बाहेक? त्यसैले पनि, कुनै एक जो परमेश्वरको हो कुराहरू थाह, परमेश्वरको आत्मा बाहेक.
2:12 तर हामी यस संसारको आत्मा प्राप्त भएको छैन, तर परमेश्वरको हो जो आत्मा, हामी परमेश्वरले हामीलाई दिइएको छ कि कुरा बुझ्न सक्छ भनेर.
2:13 र हामी पनि यी कुराहरू बताइरहेका छन्, मानव बुद्धिको सिकेका शब्दहरू छैन, तर आत्मा को सिद्धान्त मा, आध्यात्मिक कुराहरू मिलेर आध्यात्मिक कुराहरू ल्याउन.
2:14 तर मानिसको पशु प्रकृति परमेश्वरको आत्मा को हुन् भनेर यी कुराहरू बुझ्ने गर्दैन. यसको लागि उहाँलाई मूर्खता हो, र उहाँले यसलाई बुझ्न सक्षम छ, किनभने यो आध्यात्मिक जांच हुनु पर्छ.
2:15 तर मानिसको आध्यात्मिक प्रकृति सबै कुराहरू न्यायाधीशहरूले, र उहाँले द्वारा कुनै मानिसले न्याय हुन सक्छ.
2:16 लागि प्रभुको मन जो ज्ञात छ, त्यसैले उहाँलाई निर्देशन गर्न सक्छ भन्ने? तर हामी ख्रीष्टको मन छ.
3:1 अनि त, भाइहरूले, म भने आध्यात्मिक भएकाहरूलाई तपाईं कुरा गर्न सक्षम थियो, तर जो शारीरिक हो बरु ती भने. तपाईं ख्रीष्टमा शिशुहरू जस्तै छन्.
3:2 म पिउन दूध दिनुभयो, ठोस छैन खाना. तपाईं अहिलेसम्म सके लागि. र साँच्चै, अहिले पनि, तपाईं सक्षम छैनन्; लागि शारीरिक अझै पनि छन्.
3:3 अनि त्यहाँ तपाईँले बीचमा ईर्ष्या र contention अझै पनि छ देखि, तपाईं शारीरिक छैनन्, र तपाईं मानिस अनुसार हिड्ने छैन?
3:4 यदि एक भन्छन् लागि, "निश्चय, म पावलको हुँ,"गर्दा अर्को भन्छन्, "म अपोलो को हुँ,"तपाईं हुन्? तर अपोलो के छ, र पावलले के छ?
3:5 हामी केवल तपाईं विश्वास छ जसलाई मा उहाँलाई सेवक हुन्, प्रभु तपाईं को प्रत्येक प्रदान गरेको छ जस्तै.
3:6 म लगाए, अपोलो पानी, तर परमेश्वरले वृद्धि प्रदान.
3:7 अनि त, न उहाँले जो बिरुवाहरु, न त उहाँले जो पानी हाल्दै, केहि छ, तर केवल परमेश्वरको, जसले वृद्धि प्रदान गर्दछ.
3:8 अब उहाँले जो बिरुवाहरु, र उहाँले गर्ने पानी हाल्दै, एक छन्. तर प्रत्येक उनको उचित इनाम हुनेछ, आफ्नो मेहनत अनुसार.
3:9 हामी परमेश्वरको सहायक हो. तपाईं परमेश्वरको खेती हो; तपाईं परमेश्वरको निर्माण हो.
3:10 परमेश्वरको अनुग्रहको अनुसार, जो मलाई दिइएको छ, म एक बुद्धिमानी architect जस्तै जग बसाल्यो छन्. तर अर्को यसलाई मा बनाउँछ. त्यसैले त, उहाँले यो मा बनाउँछ हरेक एक सावधान गरौं.
3:16 के तपाईं परमेश्वरको मन्दिर हो भनेर थाहा छैन, र परमेश्वरको आत्मा तपाईं भित्र बस्छ कि?
3:17 तर कसैले परमेश्वरको मन्दिर उल्लङ्घन यदि, परमेश्वरले उहाँलाई नाश. परमेश्वरको मन्दिर लागि पवित्र छ, र तपाईं मन्दिर हो.
3:18 कुनै एक आफूलाई धोका गरौं. तपाईं बीचमा कसैले यो उमेर मा बुद्धिमानी देखिन्छ भने, उहाँलाई मूर्ख होस्, उहाँले साँच्चै बुद्धिमानी हुन सक्छ भनेर.
3:19 यो संसारको बुद्धि परमेश्वरको साथ मूर्खता हो. र त यो लिखित गरिएको छ: "म आफ्नै astuteness मा बुद्धिमानी पकड हुनेछ।"
3:20 अनि फेरि: "प्रभु बुद्धिमानको को विचार थाह, तिनीहरूले व्यर्थमा छन्। "
3:21 अनि त, मानिसहरू कुनै एक महिमा गरौं.
3:22 सबै लागि तपाईंको हो: कि पावलले, वा अपोलो, वा Cephas, वा संसारको, वा जीवन, वा मृत्यु, वा वर्तमान, वा भविष्यमा. हो, सबै तपाईंकै हो.
3:23 तर तपाईं ख्रीष्टको हो, र ख्रीष्टको परमेश्वरको छ.
4:1 तदनुसार, मानिसले हामीलाई परमेश्वरको रहस्य को ख्रीष्टको सेवक र परिचारक हुन विचार गरौं.
4:2 यहाँ र अब, यो प्रत्येक एक विश्वासी हुन पाउन परिचारक को आवश्यक छ.
4:3 तर मेरो लागि रूपमा, यो यस्तो सानो कुरा तपाईं न्याय गर्न छ, वा मानिसजातिको उमेर द्वारा. र न म न्याय गर्छन्.
4:4 म मेरो अन्तस्करणले मा केही छ लागि. तर म यो द्वारा जायज होइन. प्रभु मलाई न्यायाधीशहरूले गर्ने एक छ.
4:5 अनि त, समय अघि न्याय गर्न छनौट छैन, प्रभु लाभ सम्म. उहाँले अन्धकारको लुकेको कुरा उजाला हुनेछ, र उहाँले हृदय निर्णय प्रकट हुनेछ. र त्यसपछि प्रत्येक एक परमेश्वरको प्रशंसा हुनेछ.
4:6 अनि त, भाइहरूले, म मा र अपोलो यी कुराहरू प्रस्तुत गरेका छन्, आफ्नो sakes लागि, तपाईं सिक्न सक्छ भनेर, हामीलाई मार्फत, कुनै एक एक व्यक्ति विरुद्ध र अर्को लागि देखावटी पर्छ भनेर, लिखित गरिएको छ परे छैन.
4:7 अर्को तपाईंले distinguishes के को लागि? र तपाईं प्राप्त भएको छैन भनेर के? तर तपाईं यो प्राप्त गर्नुभएको छ भने, किन महिमा गर्न, यदि तपाईंलाई प्राप्त गरेका थिए रूपमा?
4:8 त्यसैले, अब तपाईं भरिएको छ, र अब तपाईं धनी गरेका छन्, हामीलाई बिना शासन गर्न भने? तर म तपाईं शासन भनेर इच्छा, ताकि हामी, पनि, तपाईं शासन सक्छ!
4:9 म परमेश्वरले हामीलाई अन्तिम प्रेषित रूपमा प्रस्तुत गरेको छ कि लाग्छ, मृत्यु लागि ती किस्मत रूपमा. हामी संसारको लागि एक अमरीकी मा गरेका छन् लागि, स्वर्गदूतहरू र, मानिसहरू र.
4:10 त्यसैले हामी किनभने ख्रीष्टको मूर्ख छन्, तर तपाईं ख्रीष्टमा समझदार छन्? हामी कमजोर, तर बलियो छन्? तपाईं महान छन्, तर हामी ignoble छन्?
4:11 पनि यो धेरै घन्टा, हामी भोक र तिर्खा, र हामी नाङ्गो र बारम्बार कुटपिट छन्, र हामी अस्थिर छन्.
4:12 अनि हामी श्रम, हाम्रो आफ्नै हातमा काम. हामी बदनाम छन्, र त हामी आशीर्वाद. हामी ग्रस्त र सतावट सहन.
4:13 हामी श्राप छन्, र त हामी प्रार्थना. हामी यस संसारको इन्कार जस्तै भएका छन्, सबै को निवास जस्तै, पनि अहिले सम्म.
4:14 म तपाईंलाई confound गर्न यी कुराहरू लेखेर होइन, तर क्रममा तपाईं admonish गर्न, मेरो Dearest छोराहरू.
4:15 तपाईं ख्रीष्टमा दस हजार निर्देशक हुन सक्छ लागि, तर यति धेरै छैन पुर्खाहरूले. ख्रीष्ट येशूमा लागि, सुसमाचारको मार्फत, म प्यारो छ.
4:16 त्यसैले, म तपाईंसँग प्रार्थना गर्छु, मेरो देखासिकी गर्नेहरू हुन, म ख्रीष्टको हुँ जस्तै.
4:17 यस कारण, म तिमोथी पठाएको, जो मेरो Dearest छोरा छ, र प्रभु वफादार गर्ने छ. उहाँले मेरो तरिका को सम्झाउने, जो ख्रीष्ट येशूको छन्, म सबैतिर सिकाउन जस्तै, हरेक चर्च मा.
4:18 केही व्यक्ति म फर्कन छैन भनेर सोच मा देखावटी भएका छन्.
4:19 तर म छिट्टै फर्केर, प्रभु इच्छुक छ भने. र म विचार गर्नेछौं, देखावटी छन् गर्नेहरूको छैन शब्दहरू, तर सद्गुण.
4:20 परमेश्वरको राज्यको लागि शब्द छैन, तर सद्गुण मा.
4:21 तपाईं के रुचि थियो? म एक छडी तपाईंलाई फर्कन गर्नुपर्छ, वा दान र नम्रता एक आत्माको?
5:1 सबै अरू माथि, यो तपाईं बीचमा व्यभिचार हो भन्नुभयो भइरहेको छ, पनि छ कि छैन अन्यजातिहरूको बीचमा यस्तो प्रकारको व्यभिचार, कसैले आफ्नो पिता को पत्नी हुनेछ भनेर.
5:2 र अझै तपाईं देखावटी छन्, र यसको सट्टा तपाईंले दुखी छैन गरिएको, त्यसैले यो कुरा गर्नुभएको छ जसले आफ्नो बीचमा देखि लगिएको थियो.
5:3 पक्कै पनि, शरीर मा अनुपस्थित हुनत, म आत्मा मा उपस्थित छु. त्यसैले, म पहिले नै न्याय गरेका छन्, भने म उपस्थित थिए, उसलाई जो यस गरेको छ.
5:4 हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, तपाईं मेरो आत्मा संग भेला गरिएको छ, हाम्रा प्रभु येशूको शक्ति,
5:5 शैतानले यो रूपमा यस्तो एउटा हात गर्न, शरीरका विनाश लागि, आत्मा हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको दिनमा सुरक्षित हुन सक्छ भनेर.
5:6 यो महिमा गर्न को लागि राम्रो छ. तपाईं एक सानो खमिर सम्पूर्ण आम corrupts कि थाह?
5:7 पुरानो खमिर हटाउन, तपाईं नयाँ रोटी बन्न सक्छ भनेर, लागि अखमिरी छन्. ख्रीष्टको, हाम्रो निस्तार, अब immolated गरिएको छ.
5:8 अनि त, हामीलाई भोजमा गरौं, छैन पुरानो खमिर संग, छैन अरुको अहित गर्ने इच्छा र दुष्टताको खमिर संग, तर निष्कपटता र सत्यको अखमिरी रोटी.
5:9 म एक epistle तपाईं लेखिएका छन् रूपमा: "Fornicators संगत छैन,"
5:10 पक्कै पनि यो संसारमा को fornicators संग, न त लोभी संग, डाँकुहरूको संग न त, न त मूर्तिपूजा को सेवकहरूसित. अन्यथा, तपाईं यस संसारबाट विदा गर्नुपर्छ.
5:11 तर अब म तपाईंलाई लिखित छ: कुनै एक भाइ भनिन्छ र अझै छ जसले संगत छैन व्यभिचारीले छ, वा लोभी, वा मूर्तिपूजा सेवक, वा slanderer, वा inebriated, वा डाकू. यो रूपमा यस्तो एक साथ, पनि खाना लिने छैन.
5:12 म के को लागि बाहिर भएकाहरूलाई न्याय संग गर्न? तर पनि तिमीहरू भित्र भएकाहरूलाई न्याय छैन?
5:13 ती लागि बाहिर गर्ने हो, भगवान न्याय. तर यो दुष्ट व्यक्ति आफैलाई टाढा पठाउन.
6:1 यसलाई कसरी छ भन्ने को जो कोहीले, अर्को विरुद्ध विवाद भइरहेको, को iniquitous अघि न्याय हिम्मत थियो, र छैन सन्तहरू अघि?
6:2 अथवा तपाईं यस उमेर देखि सन्तहरू यो न्याय भन्ने थाहा छैन? र दुनिया तपाईं न्याय छ भने, तपाईं अयोग्य छन्, त्यसपछि, पनि सानो विषयमा न्याय गर्न?
6:3 तपाईं हामी स्वर्गदूतहरू न्याय भन्ने थाहा छैन? कति थप यो उमेर कुराहरू?
6:4 त्यसैले, यो उमेर विषयमा न्याय मामिलामा यदि, किन चर्च सबैभन्दा अधम भएकाहरूलाई यी कुराहरू न्याय गर्न नियुक्त गर्न!
6:5 तर म लाज रूपमा यति कुरा छु तपाईं. त्यहाँ पर्याप्त बुद्धिमानी तपाईं बीच कुनै एक छ, उहाँले आफ्ना भाइहरूलाई बीचमा न्याय गर्न सक्षम हुन सक्छ भनेर?
6:6 बरु, भाइ अदालत मा भाइ विरुद्ध contends, र यो विश्वासघात अघि!
6:7 अब त्यहाँ पक्कै पनि तपाईं बीच एक ठेस छ, अरू सबै कुरा बाहिर, तपाईंले एक अर्को विरुद्ध अदालत अवस्थामा हुँदा. यसको सट्टा तपाईंले चोट स्वीकार गर्नुपर्छ? यसको सट्टा तपाईंले धोखा हुँदैन सहन भइरहेको?
6:8 तर तपाईं injuring र धोखा गरिरहेका छन्, र भाइहरू तिर यो!
6:9 तपाईं कि iniquitous परमेश्वरको राज्यको अधिकार छैन थाह? हराउनु लक्षविना हिड्नु गर्न छनौट छैन. न fornicators लागि, न त मूर्तिपूजा सेवकहरू, न त adulterers,
6:10 न त effeminate, न त पुरुषहरु सुत्न गर्ने पुरुषहरु, न त चोर, न त avaricious, न त inebriated, न त अर्कालाई दोष लाउने, न त rapacious परमेश्वरको राज्यको अधिकार गर्नेछन्.
6:11 र तपाईं को केही जस्ता थिए. तर तपाईं absolved गरिएको छ, तर तपाईं पवित्र छन्, तर तपाईं जायज छन्: सबै हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा र हाम्रो परमेश्वरको आत्मामा.
6:12 सबै मलाई न्यायसंगत छ, तर सबै expedient छ. सबै मलाई न्यायसंगत छ, तर म कुनै को अधिकार फिर्ता संचालित गरिनेछ.
6:13 खाद्य पेट लागि हो, र पेट खाना लागि हो. तर परमेश्वरले पेट र खाना दुवै नष्ट गर्नेछु. र शरीर व्यभिचार लागि छैन, तर प्रभु लागि बरु; र प्रभु शरीर लागि हो.
6:14 साँच्चै, भगवान खडा गर्नुभएको छ प्रभु, र उहाँले आफ्नो शक्ति द्वारा अप हामीलाई उठाउनु हुनेछ.
6:15 तपाईं आफ्नो शरीर ख्रीष्टको भाग हो भनेर थाहा छैन? त्यसैले त, म ख्रीष्टको एक भाग लिन र यो एक वेश्या को एक भाग बनाउनुपर्छ? यो त हुन गरौं!
6:16 र तपाईं जसले एक वेश्या शामिल छ एक शरीर हुन्छ कि थाहा छैन? "दुई लागि," उसले भन्यो, "एउटै शरीर रूपमा हुनेछ।"
6:17 तर जसले प्रभु शामिल छ एक आत्मा छ.
6:18 व्यभिचार भाग्न. एक मानिस commits पाठका हरेक पाप शरीर बाहिर छ, तर जसले fornicates, आफ्नै शरीरको विरुद्धमा पाप.
6:19 वा तपाईं आफ्नो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो भनेर थाहा छैन, जसले तपाईंलाई छ, तपाईं परमेश्वरको छ जसलाई, र तपाईं आफ्नो नभएको?
6:20 तपाईं एक ठूलो मूल्य मा किनेको छ को लागि. महिमा र आफ्नो शरीर परमेश्वरको बोक्न.
7:1 अब तिमी मलाई यस्तो लेखे जो बारेमा कुराहरूको: एक मानिस एक महिला स्पर्श गर्न को लागि यो राम्रो छ.
7:2 तर, किनभने व्यभिचारको, प्रत्येक मानिस आफ्नै पत्नी गरौं, अनि हरेक स्त्रीको आफ्नै पति होस्.
7:3 पतिले आफ्नो पत्नी आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ, र एक पत्नी पनि पतिको तिर पनि त्यस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ.
7:4 यो पत्नी छैन, तर पति, जो उनको शरीर माथि शक्ति छ. तर, त्यस्तै पनि, यो पति छैन, तर पत्नी, जो आफ्नो शरीर माथि शक्ति छ.
7:5 त्यसैले, एक अर्को आफ्नो दायित्व मा असफल छैन, सहमति गरेर सायद बाहेक, सीमित समयको लागि, तपाईं प्रार्थना लागि आफूलाई खाली हुन सक्छ भनेर. अनि तेस्पछि, फेरि सँगै फिर्ता, शैतानले नत्र आफ्नो abstinence को माध्यम द्वारा लोभ्याउन.
7:6 तर म यो भन्दै छु, न एक भोग रूपमा, न त एक आज्ञा रूपमा.
7:7 तपाईं थिए सबै आफैलाई मन भने म यसलाई रुचि थियो लागि. तर प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वरको आफ्नो उचित उपहार छ: यसरी एक, अझै त्यो बाटो अर्को.
7:8 तर म अविवाहित र विधवाहरूलाई भन्न: यो तिनीहरूको लागि राम्रो छ, यदि तिनीहरूले हुन् रहने थियो, जस्तै म पनि हुँ.
7:9 तर तिनीहरू रोक्न सक्दैन भने, तिनीहरूले विवाह गर्नुपर्छ. यो विवाह गर्न राम्रो छ लागि, जलाइएको गर्न भन्दा.
7:10 तर Matrimony मा सामेल गरिएको छ गर्नेहरूलाई, यो तपाईं आज्ञा जो म होइन, तर प्रभु: एक पत्नी पतिको अलग गर्न छैन.
7:11 तर त्यो उसलाई अलग छ भने, त्यो अविवाहित हुनैपर्छ, वा पतिको मिलाप गर्न. र पतिले पत्नी छोडपत्र हुँदैन.
7:12 बाँकी विषयमा, म बोल्दै छु, प्रभु छैन. कुनै पनि भाइ अर्कै धर्म मान्ने पत्नी छ भने, र त्यो उसलाई बाँच्न consents, उहाँले उनको छोडपत्र हुँदैन.
7:13 र कुनै पनि महिला अर्कै धर्म मान्ने पति छ भने, र उनको साथ बाँच्न consents, त्यो उनको पति छोडपत्र हुँदैन.
7:14 यस बेग्लै धर्म मान्ने पति विश्वास पत्नी मार्फत पवित्र गरिएको छ लागि, र विश्वास नगर्ने पत्नी विश्वास पति माध्यम पवित्र गरिएको छ. अन्यथा, छोराछोरीलाई अशुद्ध हुनेछ, बरु जबकि तिनीहरू पवित्र छन्.
7:15 तर विश्वास नगर्ने प्रस्थान यदि, उसलाई प्रस्थान गरौं. एक भाइ वा बहिनी लागि यसरी servitude विषय गर्न सकिन्छ. परमेश्वरको लागि शान्ति हामीलाई भनिन्छ छ.
7:16 र तपाईँलाई कसरी थाहा, पत्नी, तपाईं आफ्नो पति सुरक्षित हुनेछ कि? वा तपाईंले कसरी थाहा, पति, तपाईं आफ्नो पत्नी सुरक्षित हुनेछ कि?
7:17 तर, प्रभु उहाँलाई वितरण गरेको छ जस्तै प्रत्येक एक पैदल गरौं, बस परमेश्वरको रूपमा प्रत्येक एक उसलाई भनिन्छ छ. र यसरी म सबै चर्चमा सिकाउँछ.
7:18 कुनै पनि खतना मानिस गरिएको छ? उहाँलाई आफ्नो खतना कवर छैन गरौं. कुनै पनि खतना मानिस गरिएको छ? उसलाई खतना हुन गरौं.
7:19 खतना केही छ, र uncircumcision केही छ; त्यहाँ परमेश्वरको आज्ञा मात्र उत्सव छ.
7:20 प्रत्येक एक नै कल मा रहने उहाँले भनिन्थ्यो जो गरौं.
7:21 तपाईं भनिन्छ गरिएको छ जो एक सेवक हो? यसको बारेमा चिन्तित हुन छैन. तर तपाईं कहिल्यै मुक्त हुन सक्ने क्षमता छ भने, यसलाई प्रयोग.
7:22 प्रभुमा भनिन्छ गरिएको छ जो कुनै पनि सेवक लागि प्रभुमा मुक्त छ. त्यसैगरि, भनिन्छ गरिएको छ जो कुनै पनि निःशुल्क व्यक्ति ख्रीष्टमा सेवक छ.
7:23 तपाईं एक मूल्य संग किनेको छ. मानिसहरूको सेवकहरू बन्न इच्छुक छैन.
7:24 भाइहरूलाई, हरेकले, जो अवस्थामा उहाँले भनिन्थ्यो, परमेश्वरको संग अवस्थामा रहन.
7:25 अब, कन्याहरूले विषयमा, म प्रभु कुनै आज्ञा छ. तर म सल्लाह दिन, प्रभुको कृपा प्राप्त छ जो एक रूप, विश्वासी हुन ताकि.
7:26 त्यसैले, म यो राम्रो हुन विचार, किनभने वर्तमान आवश्यकता को: म हुँ रूपमा एक मानिस जस्तै हुन लागि यो राम्रो छ कि.
7:27 तपाईं एक पत्नी गर्न बाध्य छन्? छुटकारा खोजी छैन. तपाईं एक पत्नी मुक्त छन्? एक पत्नी खोज्न छैन.
7:28 तर तपाईं एक पत्नी लिन भने, तपाईं पाप छैन. र यदि कुमारी विवाह भएको छ, त्यो पाप छैन. तथापि, यस्तो यी शरीरका कष्ट हुनेछ. तर म यो तपाईंले छोडूँगा थियो.
7:29 अनि त, यो के म भन्न छ, भाइहरूले: समय छोटो छ. के यो रहिरहन्छ कि यस्तो छ: तिनीहरूले कुनै पनि थियो भने पत्नी गर्नेहरूलाई हुनुपर्छ;
7:30 र जो रुन्छ ती, हुनत तिनीहरूले रोइरहेका थिएनन्; र जो आनन्दित ती, यदि तिनीहरूले आनन्द थियो; र जो किन्न ती, तिनीहरूले केही नजिकै भने;
7:31 र यो संसारको कुराहरू जो प्रयोग ती, यदि तिनीहरूले तिनीहरूलाई प्रयोग थिएनन्. यो संसारको आंकडा टाढा पारित गरिएको छ लागि.
7:32 तर म तपाईलाई बिना हुन रुचि थियो. जसले एक पत्नी बिना छ प्रभुको कुराहरू चिन्तित छ, उहाँले परमेश्वरलाई प्रसन्न हुन सक्छ कसरी रूपमा.
7:33 तर जसले एक पत्नी छ संसारको कुराहरू चिन्तित छ, उहाँले आफ्नो पत्नी खुसी हुन सक्छ कसरी रूपमा. अनि त, उहाँले विभाजित छ.
7:34 र अविवाहित महिला र कुमारी प्रभुको छन् कि कुरा सोच्न, त्यो शरीर र आत्मा पवित्र हुन सक्छ भनेर. तर विवाहित छ जो त्यो संसारको छन् कि कुरा बारे सोच्छ, त्यो उनको पति खुसी हुन सक्छ कसरी रूपमा.
7:35 यसबाहेक, म तपाईंको आफ्नै फाइदाको लागि यो भन्दै छु, तपाईं भन्दा पासो डाली गर्न, तर जे तिर इमानदार छ र जो रोकावट बिना हुन सक्ने क्षमता प्रदान गर्न सक्छ, प्रभु उपासना ताकि.
7:36 तर कुनै पनि मानिस आफूलाई ठान्नुहुन्छ भने dishonorable जस्तो गर्न, वयस्क उमेर छ जो एक कुमारी विषयमा, र त यो सक्नुपर्छ, उहाँले विल्स रूपमा उहाँले के हुन सक्छ. उनको विवाह भने, उहाँले पाप गर्दैन.
7:37 तर उहाँले आफ्नो हृदयमा दृढ निर्णय गरेको छ भने, र उहाँले कुनै पनि दायित्व छैन, तर आफ्नो स्वतन्त्र इच्छा मात्र शक्ति, र उहाँले आफ्नो हृदयमा यो न्याय गरेको छ भने, उनको एक कुमारी रहन दिनु, उहाँले राम्रो गर्छ.
7:38 अनि त, उहाँले आफ्नो कुमारी संग जो मिलती Matrimony राम्रो हुन्छ मा, र उहाँले गर्ने सामेल छैन उनको राम्रो गर्छ संग.
7:39 एक स्त्रीको रूपमा लामो पतिको बसोबास रूपमा लागि कानुन अन्तर्गत बाध्य छ. तर पतिको मृत्यु भएको छ भने, त्यो मुक्त छ. उनले जसलाई इच्छा विवाह हुन सक्छ, तर प्रभुमा मात्र.
7:40 तर त्यो थप अनमोल हुनेछ, त्यो यस अवस्थामा रहन्छ भने, मेरो सल्लाह अनुसार मा. र म मलाई लाग्छ, पनि, परमेश्वरको आत्मा छ.
8:1 अब मूर्तिहरू बलि छन् ती कुराहरूको: हामी सबै ज्ञान छ भन्ने थाहा. ज्ञान अप puffs, तर दान उन्नति गराउँछ.
8:2 तर आफूलाई केही थाहा कसैलाई ठान्नुहुन्छ भने, उहाँले अहिलेसम्म बाटो मा थाहा छैन कि उहाँले थाहा गर्नुपर्छ.
8:3 कसैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछ भने लागि, उहाँले उसलाई ज्ञात छ.
8:4 तर मूर्तिहरू गर्न immolated छन् भनेर खाद्य पदार्थ रूपमा, हामी संसारमा एउटा मूर्ति केही हो भनेर थाहा, र कुनै एक परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने, एक बाहेक.
8:5 हुनत देवताहरूको भनिन्छ कुराहरू छन् लागि, स्वर्गमा वा पृथ्वीमा कि, (एक त्यहाँ पनि ठान्नुहुन्छ भने धेरै देवताहरू र धेरै प्रभुहरूका हुन)
8:6 अझै हामी त्यहाँ एउटा मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने थाहा, बाबा, जसलाई सबै कुराहरू छन्, र जसलाई हामी हो, र एक प्रभु येशू ख्रीष्टको, जसलाई मार्फत सबै कुराहरू छन्, र जसलाई द्वारा हामी.
8:7 तर ज्ञान सबैलाई छैन. केही व्यक्तिका लागि, अहिले पनि, मूर्तिको गर्न सहमति, मूर्तिको बलि गरिएको छ के खाने. र आफ्नो विवेक, infirm हुनुको, प्रदूषित हुन्छ.
8:8 अझै खाना परमेश्वरको हामीलाई प्रशंसा गर्दैन. यदि हामी खान को लागि, हामी थप हुनेछैन, र यदि हामी खान छैन, हामी कम हुनेछैन.
8:9 तर आफ्नो स्वतन्त्रता कमजोर गर्नेहरूलाई पापको एक कारण होस् होसियार हुन.
8:10 जो कोहीले ज्ञान कसैले देख्छन् भने मूर्तिपूजा मा खान तल बसिरहेका लागि, छैन आफ्नै अन्तस्करणले, infirm हुनुको, मूर्तिहरू बलि गरिएको छ के खान emboldened गर्न?
8:11 र एक infirm भाइ आफ्नो ज्ञान द्वारा नष्ट गर्नुपर्छ, तापनि ख्रीष्टले उहाँलाई लागि मृत्यु?
8:12 त्यसैले तपाईं भाइहरूलाई विरुद्ध यसरी पाप गर्दा, र तपाईं आफ्नो कमजोर अन्तस्करण हानि, त्यसपछि तपाईं ख्रीष्टको विरुद्ध पाप.
8:13 किनभने यो, खाना मेरो भाइ जान्छ भने पाप गर्न, म मासु कहिल्यै खान हुनेछ, नत्र म पाप मेरो भाइ नेतृत्व.
9:1 म मुक्त छैन? म एक प्रेरित हुँ? म ख्रीष्ट येशूको हाम्रा प्रभु देखेको छैन? तिमी मेरो प्रभु छैन काम हो?
9:2 र यदि म अरूलाई एउटा प्रेरित छैन, अझै अझै पनि म तपाईंलाई छु. तपाईं प्रभु मेरो Apostleship को छाप हो को लागि.
9:3 मलाई केरकार गर्नेहरूलाई मेरो रक्षा यो छ:
9:4 हामी खान र पिउन अख्तियार छन्?
9:5 हामी एक बहिनी हो जो एक महिला संग वरिपरि यात्रा गर्न अख्तियार गर्छन्, जस्तै गर्न अन्य प्रेरितहरू, र प्रभुको भाइ, र Cephas?
9:6 वा यो केवल आफैलाई र बर्णाबासले यसरी कार्य गर्न अख्तियार नगर्ने हो?
9:7 कहिल्यै सैनिक सेवा र आफ्नै stipend भुक्तानी गरेको छ जो? कसले दाखबारी वनस्पति र यसको उत्पादन देखि खान छैन? जो एक बगाल Pastures र बगालका दूध देखि पिउन छैन?
9:8 म मानिस अनुसार यी कुराहरू भन्दै छु? या कानून पनि यी कुराहरू भन्नुहुन्छ?
9:9 यसलाई मोशाको व्यवस्थामा लेखिएको छ: "तपाईंले बैल को मुख बाँध्न छैन, यो अन्न बाहिर treading बेला। "परमेश्वरको यहाँ बैलों संग चिन्तित छ?
9:10 वा उहाँले यसो छ, साँच्चै, हाम्रो खातिर? यी कुराहरू हाम्रो लागि विशेष लेखिएका थिए, किनभने उहाँले जो plows, आशा मा हलो गर्नुपर्छ, र उहाँले गर्ने threshes, पनि, को उत्पादन प्राप्त आशामा.
9:11 हामी तपाईंलाई आध्यात्मिक कुराहरू छरिएको छ भने, यसलाई हामी आफ्नो सांसारिक कुराहरू देखि बाली यदि महत्त्वपूर्ण छ?
9:12 यदि तपाईंले अरूलाई भन्दा यो अधिकार मा साझेदारहरू हुन्, किन हामी थप हकदार छैनन्? र अझै हामी यो अधिकार प्रयोग गरेको छैन. बरु, हामी सबै कुरा सहन, हामी ख्रीष्टको सुसमाचार कुनै पनि रोकावट दिन नत्र.
9:13 तपाईंलाई थाहा पवित्र ठाउँमा काम गर्ने ती पवित्र स्थानको लागि हो कि कुराहरू खान भनी छैन, र वेदी मा सेवा गर्नेहरूलाई पनि वेदी साझेदारी गर्न?
9:14 त्यसैले, पनि, प्रभु सुसमाचारको घोषणा गर्नेहरूलाई सुसमाचारको द्वारा बाँच्न गर्नुपर्छ भनेर नियुक्त गरेको छ.
9:15 अझै म यी कुराहरू कुनै पनि प्रयोग गरेका छन्. र म यी कुराहरू मेरो लागि गरेको हुन सक्छ भनेर लेख्नुभएको छैन. मलाई मर्न लागि यो राम्रो छ लागि, जो कोहीले मेरो महिमा बाहिर खाली गरौं भन्दा.
9:16 यदि म सुसमाचार प्रचार लागि, यो मेरो लागि महिमा छैन. एउटा दायित्व लागि मलाई मा राखिएको छ. र धिक्कार मलाई, यदि म सुसमाचार प्रचार छैन.
9:17 लागि भने म स्वेच्छाले यो, म एक इनाम छ. तर यदि म अनिच्छा यो, एक प्रबन्धको मलाई प्रदान गरिएको छ.
9:18 र के, त्यसपछि, मेरो इनाम हुनेछ? त्यसैले, जब सुसमाचार प्रचार, म लिएर बिना सुसमाचारको दिनुपर्छ, म सुसमाचारको मेरो अधिकार दुरुपयोग हुन सक्छ भनेर छैन.
9:19 म सबै गर्न निःशुल्क मानिस थिए जब लागि, म सबै को दास बनाए, म सबै थप पाउन सक्छ भनेर.
9:20 अनि त, यहूदीहरूलाई, म एक यहूदी जस्तै भयो, ताकि म यहूदीहरूको पाउन सक्छ.
9:21 व्यवस्था अन्तर्गत रहनेहरूलाई, म कानुन अन्तर्गत थिए भने म भए, (म कानुन अन्तर्गत थिएन यद्यपि) म कानुन अन्तर्गत थिए ती पाउन सक्छ त. व्यवस्था बिना थिए गर्नेहरूलाई, म व्यवस्था बिना थिए भने म भए, (म परमेश्वरको व्यवस्था बिना थियो हुनत, ख्रीष्टको व्यवस्था मा रहेको) म व्यवस्था बिना थिए ती पाउन सक्छ त.
9:22 को कमजोर, म कमजोर भए, म कमजोर पाउन सक्छ त. सबैलाई, म सबै भए, त्यसैले म सबै सुरक्षित हुन सक्छ.
9:23 र म सुसमाचारको खातिर सबै के, म यसको साझेदार हुन सक्छन् भनेर.
9:24 तपाईं थाहा छैन, एक जाति चल्न गर्नेहरूको, ती सबै, पक्कै पनि, धावक हुन्, तर एक पुरस्कार प्राप्त छ. त्यसैगरि, तपाईं चलान पर्छ, तपाईं हासिल गर्न सक्छ भन्ने त.
9:25 र एक प्रतियोगिता मा competes गर्ने एक सबै कुराहरू देखि abstains. र तिनीहरूले यो, को पाठ्यक्रम, तिनीहरूले एक corruptible मुकुट हासिल हुन सक्छ भनेर. तर हामी यो, हामी प्राप्त हुन सक्छ भनेर के incorruptible छ.
9:26 र त म चलान, तर अनिश्चितता संग. र त म लड्न, तर हावा मा flailing द्वारा.
9:27 बरु, म मेरो शरीर chastise, servitude यसलाई पुनर्निर्देशित गर्न ताकि. अन्यथा, म अरूलाई प्रचार सक्छ, तर आफैलाई एक outcast बन्न.
10:1 म तपाईं नजान्ने हुन चाहँदैनन्, भाइहरूले, हाम्रो पुर्खाहरूले बादल अन्तर्गत सबै थिए, र तिनीहरू सबै समुद्रमा मार्फत गए.
10:2 मोशाले मा, तिनीहरू सबै बप्तिस्मा, बादल र समुद्रमा मा.
10:3 र तिनीहरू सबै एउटै आध्यात्मिक भोजन खाए.
10:4 र तिनीहरू सबै एउटै आध्यात्मिक पेय को पिए. अनि त, तिनीहरू सबै तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न खोजिरहेका आध्यात्मिक रक को पिउने थिए; र रक ख्रीष्टको थियो.
10:5 तर ती सबै भन्दा संग, भगवान राम्रो-खुसी थिएन. तिनीहरूले मरुभूमिमा तल प्रहार गरेका थिए लागि.
10:6 अब यी कुराहरू हाम्रो लागि एउटा उदाहरण रूपमा गरेको थियो, हामी दुष्ट कुराहरू चाहन्छन् सक्छ भनेर छैन, तिनीहरूले चाहेको जस्तै.
10:7 अनि त, मूर्तिपूजा मा भाग लिन छैन, तिनीहरूलाई केही जस्तै, यो लेखिएको थियो जस्तै: "मानिसहरू खान र पिउन बसे, त्यसपछि तिनीहरू मनोरन्जन गर्नु सम्म उठ्नुभयो। "
10:8 र हामीलाई व्यभिचार प्रतिबद्ध छैन गरौं, तिनीहरूलाई केही fornicated रूपमा, र यति बीस-तीन हजार एक दिन गिर.
10:9 र हामीलाई ख्रीष्टको लोभ्याउन छैन गरौं, तिनीहरूलाई केही परीक्षा रूपमा, र त्यसैले तिनीहरू serpents द्वारा perished.
10:10 र तपाईं गनगन हुँदैन, तिनीहरूलाई केही गनगन गरे रूपमा, र त्यसैले तिनीहरू जंगी जहाज द्वारा perished.
10:11 अब यी कुराहरू सबै उदाहरणको रूपमा तिनीहरूलाई भयो, र त्यसैले तिनीहरू हाम्रो सुधार को लागि लिखित गरिएको छ, अन्तिम उमेर हामीमाथि खसेको छ किनभने.
10:12 अनि त, जसले आफूलाई खडा गर्न ठान्नुहुन्छ, गिर गर्न उहाँलाई सावधान गरौं.
10:13 प्रलोभनको तपाईं को पकड लिनु हुँदैन, मानव के बाहेक. परमेश्वरको विश्वासयोग्य छ, र उहाँले तपाईं आफ्नो क्षमता परे परीक्षा गर्न अनुमति छैन. बरु, उहाँले आफ्नो प्रोभिडेन्स प्रभावित हुनेछ, पनि प्रलोभनको समयमा, तपाईं यसलाई सहन गर्न सक्षम हुन सक्छ भनेर.
10:14 किनभने यो, मेरो सबै भन्दा प्रिय, मूर्तिहरू उपासनामा भाग्न.
10:15 म चतुर भएकाहरूलाई बोल्दै छु देखि, म आफूलाई लागि के भन्न न्याय.
10:16 हामी आशीर्वाद कि benediction को कप, यो ख्रीष्टको रगत एक सहभागिता छ? र हामी तोड्न कि रोटी, यो प्रभुको शरीर मा एक सहभागिता छ?
10:17 एक रोटी मार्फत, हामी, धेरै हुनत, एक शरीर हो: हामी सबै जो एक रोटी सहभागीहरू छन्.
10:18 इजरायल विचार, शरीरको अनुसार. छैन ती वेदी बलिदान सहभागीहरू देखि खान गर्ने हो?
10:19 के अर्को छ? म मूर्तिहरू के immolated छ केहि छ भनेर भन्न गर्नुपर्छ? वा मूर्ति केहि छ कि?
10:20 तर कुरा भनेर अन्यजातिहरूको immolate, तिनीहरूले दुष्ट गर्न immolate, र छैन परमेश्वरको. र म तपाईंलाई दुष्ट संग सहभागीहरू चाहँदैनन्.
10:21 तपाईं प्रभुको कचौरा पिउन सक्दैन, र दुष्ट को कप. तपाईं प्रभुको तालिका सहभागीहरू हुन सक्दैन, र दुष्ट को तालिका सहभागीहरू.
10:22 वा हामी डाह गर्न प्रभु प्रकुपित गर्नुपर्छ? उहाँले छ भन्दा हामी बलिया छौं? सबै मलाई न्यायसंगत छ, तर सबै expedient छ.
10:23 सबै मलाई न्यायसंगत छ, तर सबै edifying छ.
10:24 कुनै एक आफूलाई लागि खोजी गरौं, अरूको लागि तर.
10:25 जो बजार मा बेचिएको छ, तपाईं खान सक्छ, बिना अन्तस्करणको खातिर प्रश्न.
10:26 "पृथ्वी र यसका सबै पूर्णतामा प्रभु हौं।"
10:27 यदि तपाईं कुनै पनि बेग्लै विश्वास द्वारा आमन्त्रित गरिन्छ, र तपाईं जान इच्छुक छन्, तपाईं जो तपाईंले पहिले सेट गरिएको छ खान सक्छ, बिना अन्तस्करणको खातिर प्रश्न.
10:28 तर जो कोहीले भन्छन् भने, "यो मूर्तिहरू बलि गरिएको छ,"यो खान छैन, एक खातिर जसले तपाईंलाई भन्नुभयो, र अन्तस्करणको खातिर.
10:29 तर म अन्य व्यक्ति को अन्तस्करणले बताइरहेका छु, छैन तपाइँको गर्न. किन मेरो स्वतन्त्रता अर्को अन्तस्करणले न्याय गर्नुपर्छ?
10:30 म धन्यवाद भाग भने, म किन भन्दा बदनाम गर्नुपर्छ जसको लागि म धन्यवाद दिन भनेर?
10:31 त्यसैले, तपाईं खाना वा पेय कि, या जो अरू के तपाईं सक्छ, परमेश्वरको महिमा लागि सबै के.
10:32 यहूदीहरूले तिर ठेस बिना हुन, र अन्यजातिहरूको तिर, र परमेश्वरको चर्च तिर,
10:33 बस म पनि, सबै कुरामा, सबैलाई कृपया, खोजिरहेका छैन आफैलाई लागि सबै भन्दा राम्रो छ के, तर के धेरै अरूलाई लागि सबै भन्दा राम्रो छ, तिनीहरूले मुक्ति हुन सक्छ कि त.
11:1 मेरो देखासिकी गर्नेहरू हुन, रूपमा म पनि ख्रीष्टको हुँ.
11:2 अब म तपाईंको प्रशंसा, भाइहरूले, किनभने तपाईं सबै कुरा मलाई को mindful छन्, म तिनीहरूलाई तल हस्तान्तरण गरेका छन् रूपमा मेरो आदेशहरू होल्ड रूपमा यस्तो तरिकाले.
11:3 त्यसैले म हरेक मानिसको टाउको ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर जान्न चाहन्छु. तर स्त्रीको शिर पुरुष हो. यद्यपि साँच्चै, ख्रीष्टको शिर परमेश्वर हुनुहुन्छ.
11:4 हरेक मानिस प्रार्थना वा उनको टाउको ढाकिएको संग अगमवाणी उनको टाउको disgraces.
11:5 तर हरेक महिला प्रार्थना वा ढाकिएको छैन उनको टाउको संग अगमवाणी उनको टाउको disgraces. यसको लागि नै उनको टाउको shaven थिए भने छ.
11:6 त्यसैले एक महिला घुम्टो लागेको छैन भने, गरौं उनको कपाल काटेर गर्न. साँच्चै त, यसको लागि निरादर छ भने एक स्त्रीको कपाल काटेर गर्न, वा उनको टाउको shaven छ, त्यसपछि त्यो उनको टाउको कवर गर्नुपर्छ.
11:7 पक्कै पनि, मानिस आफ्नो टाउको ढाक्न छैन पर्छ, लागि उहाँले परमेश्वरको छवि र महिमा छ. तर महिला मानिसको महिमा छ.
11:8 मानिसको स्त्रीको छैन, तर महिला मानिसको छ.
11:9 र साँच्चै, मानिस महिला लागि सिर्जना भएको थियो, तर महिला मानिस लागि सिर्जना गरिएको थियो.
11:10 त्यसैले, एक महिला उनको टाउको मा अख्तियारको चिन्ह गर्न पर्छ, किनभने को स्वर्गदूतहरू.
11:11 यद्यपि साँच्चै, मानिस महिला बिना अवस्थित थियो, न त महिला मानिस बिना अवस्थित, प्रभु मा.
11:12 महिला पुरुषले अस्तित्व आए जस्तै लागि, त्यसैले पनि मानिस महिला मार्फत अवस्थित. तर सबै कुरा परमेश्वरको छन्.
11:13 आफूलाई लागि न्यायाधीश. यसलाई उचित लागि प्रार्थना गर्न एक महिला अनावरण छ?
11:14 पनि प्रकृति आफु तपाईं सिकाउन छैन, साँच्चै, मानिस आफ्नो कपाल लामो बढ्छ भने, यो उहाँको लागि एक निरादर छ?
11:15 यद्यपि साँच्चै, एक महिला उनको कपाल लामो बढ्छ भने, यो उनको लागि एक महिमा छ, उनको बाल एक कवर रूपमा उनको दिइएको छ किनभने.
11:16 तर कुनै एक मन छ भने contentious हुन, हामी यस्तो कुनै अनुकूलन छ, न त परमेश्वरको चर्च गर्छ.
11:17 अब म सावधानी, प्रशंसा बिना, यस्को बारेमा: तपाईं सँगै भेला हुनु भन्ने, र राम्रो लागि, तर खराब लागि.
11:18 सबै भन्दा पहिले, साँच्चै, म चर्च सँगै भेला हुनु गर्दा सुन्न, तपाईं बीच schisms छन्. र म यो विश्वास, अांशिक रुपमा.
11:19 लागि पनि heresies हुनुपर्छ, परीक्षण गरिएको छ गर्नेहरूलाई तपाईं बीचमा प्रकट हुन सक्छ भनेर.
11:20 अनि त, जब तपाईं रूपमा सँगै भेला हुनु, यसलाई प्रभुको रातीको अन्तिम खाना खान क्रममा अब छ.
11:21 प्रत्येक एक पहिलो आफ्नै रातीको अन्तिम खाना लिन्छ लागि खान. र फलस्वरूप, एक व्यक्ति भोक छ, जबकि अर्को inebriated छ.
11:22 तपाईं घरहरू छैन, जसमा खान र पिउन? वा के तपाईं यस्तो घृणा छ नगर्ने ती confound भनेर परमेश्वरको मण्डलीको लागि यस्तो घृणा छ के? म तपाईंलाई के भन्न गर्नुपर्छ? म तपाईंको प्रशंसा गर्नुपर्छ? म यो तपाईं प्रशंसा होइन.
11:23 म प्रभु प्राप्त छ लागि म पनि वितरित के: प्रभु येशूले, उहाँले भन्दा हस्तान्तरण थियो नै रात, रोटी लिनुभयो,
11:24 र दिने धन्यवाद, उहाँले यसलाई भङ्ग, र भन्नुभयो: "लिनुहोस् र खान. यो मेरो शरीर हो, जो तपाईं को लागि माथि दिइएको गरिनेछ. मेरो सम्झनामा यो गर। "
11:25 त्यसैगरि पनि, कचौरा, उहाँले रातीको अन्तिम खाना खाएका थिए पछि, यसो: "यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो. यो, अक्सर तपाईं यसलाई पिउन रूपमा, मेरो सम्झनामा। "
11:26 लागि जब तपाईं यो रोटी खान्छौ र यस कचौराबाट पिउँछौ, तपाईं प्रभुको मृत्युको घोषणा, सम्म उहाँले रिटर्न.
11:27 अनि त, जसले यो रोटी खान्छ, वा प्रभुको कचौरा बाट पेय, unworthily, प्रभुको शरीर र रगतको उत्तरदायी हुनेछ.
11:28 तर गरौं एक मानिस आफूलाई जाँच्न, र, यसरी, उसलाई त्यो रोटी खाने गरौं, र कप देखि पिउन.
11:29 जसले खान्छ र पेय लागि unworthily, खाने र आफूलाई विरुद्ध वाक्य पिउने, प्रभुको शरीर हुन यो समझदार होइन.
11:30 फलस्वरूप, धेरै कमजोर र तपाईं बीच बिरामी छन्, र धेरै सुतेका छन्.
11:31 तर हामी भने आफूलाई समझदार थिए, त्यसपछि पक्कै पनि हामी न्याय हुनेछ.
11:32 अझै हामी न्याय छन्, हामी प्रभु द्वारा सही भइरहेका छन्, ताकि हामी यो संसारमा साथ निन्दा हुन सक्छ.
11:33 अनि त, मेरा दाजुभाइहरु, जब तपाईं खान सँगै भेला हुनु, एक अर्को ध्यान हुन.
11:34 जो कोहीले भोकाएको छ भने, उसलाई घर मा खान गरौं, तपाईं न्याय निम्ति सँगै भेला हुनु सक्छ कि त. बाँकी रूपमा, जब म पुग्नु म क्रममा यो सेट गर्नेछ.
12:1 अब आध्यात्मिक कुराहरूको, म नजान्ने हुन चाहँदैनन्, भाइहरूले.
12:2 तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईं थिए जब अन्यजातिहरू, तपाईं म्युट मूर्तिहरू नजिक, तपाईं नेतृत्व थिए के गर्न.
12:3 किनभने यो, म तपाईंलाई परमेश्वरको आत्मा बोल्न कुनै एक येशूको विरुद्ध श्राप utters भनेर थाहा हुनेछ. र कुनै एक येशू प्रभु हो भनी भन्न सक्षम छ, पवित्र आत्मा बाहेक.
12:4 साँच्चै, त्यहाँ विविध गौरव हो, तर एउटै आत्मा.
12:5 र विविध मंत्रालयों छन्, तर एउटै प्रभु.
12:6 र विविध काम छन्, तर एउटै परमेश्वरको, हरेकले मा सबै काम गर्दछ.
12:7 तर, आत्माको प्रकटीकरण लाभदायक छ के तिर प्रत्येक एक दिइएको छ.
12:8 पक्कै पनि, एक, आत्मा मार्फत, बुद्धि को शब्द दिइएको छ; अर्को तर, एउटै आत्मा अनुसार, ज्ञान को शब्द;
12:9 अर्को, एउटै आत्मामा, विश्वास; अर्को, एक आत्मामा, निको पार्ने वरदान;
12:10 अर्को, चमत्कारी काम; अर्को, भविष्यवाणी; अर्को, आत्माको को खुट्याउने; अर्को, भाषा विभिन्न प्रकार; अर्को, शब्दहरूको व्याख्या.
12:11 तर एक र एउटै आत्मा यी सबै कुराहरू काम गर्दछ, आफ्नो इच्छा अनुसार प्रत्येक एक वितरण.
12:12 शरीर एक हो जस्तै लागि, र अझै धेरै भागहरु छ, यसैले शरीर को सबै भागहरु, उनि धेरै छन्, केवल एक शरीर हो. त्यसैले पनि ख्रीष्ट हुनुहुन्छ.
12:13 र साँच्चै, एक आत्मामा, हामी सबै एउटै शरीर मा बप्तिस्मा, यहूदीहरूले वा अन्यजाति कि, दास वा निःशुल्क कि. र हामी सबै एक आत्मामा पिए.
12:14 शरीर को लागि, पनि, छैन एक भाग हो, तर धेरै.
12:15 को खुट्टा भन्न थिए भने, "किनभने म हात छैन, म शरीर छैन,"यो त शरीर को हुनेछ छैन?
12:16 र कान भने भन्न, "किनभने म आँखा छैन, म शरीर छैन,"यो त शरीर को हुनेछ छैन?
12:17 सारा शरीर आँखा थिए भने, कसरी सुन्न हुनेछ? सारा सुनेपछि थिए भने, यसलाई कसरी गंध थियो?
12:18 तर सट्टा, परमेश्वरले भागहरु राखिएको छ, तिनीहरूलाई प्रत्येक एक, शरीर मा, उसलाई खुसी छ जस्तै.
12:19 त्यसैले यदि तिनीहरू सबै एक भाग थिए, यसलाई कसरी एक शरीर हुनेछ?
12:20 तर सट्टा, त्यहाँ धेरै भागहरु छन्, साँच्चै, अझै एक शरीर.
12:21 र आँखा हात भन्न सक्दैन, "म आफ्नो काम को लागि कुनै आवश्यकता छ।" अनि फेरि, टाउको खुट्टा भन्न सक्दैन, "तपाईंले मलाई कुनै प्रयोग हो।"
12:22 वास्तबमा, त्यसैले धेरै आवश्यक कमजोर हुन थाल्छ जो शरीर को ती भागहरु छन्.
12:23 र हामी विचार हुनत शरीर केही भागहरु कम महान हुन, हामी थप प्रशस्त मर्यादा यी चारै ओर, र त्यसैले, ती भागहरु थप प्रशस्त आदर कम दिन लायक अन्त अप छन् जो.
12:24 तर, हाम्रो दिन लायक भागहरु जस्तै कुनै आवश्यकता छ, परमेश्वरले शरीर सँगै स्वभावका छ देखि, आवश्यकता छ जो कि गर्न थप प्रशस्त सम्मान वितरण,
12:25 त्यहाँ शरीर मा कुनै schism हुन सक्छ भनेर, तर यसको सट्टा भागहरु आफूलाई एक अर्को को हेरविचार लिन सक्छ.
12:26 अनि त, यदि एक भाग केहि पीडित, सबै भागहरु संग ग्रस्त. वा, एक भाग महिमा पाता भने, सबै भागहरु संग रमाउने.
12:27 अब तपाईं ख्रीष्टको शरीर हो, र कुनै पनि भाग जस्तै भागहरु.
12:28 र साँच्चै, परमेश्वरको मण्डली मा एक निश्चित अर्डर स्थापित छ: पहिलो प्रेरितहरू, दोस्रो भविष्यवक्ताहरूलाई, तेस्रो शिक्षक, अर्को चमत्कार-कार्यकर्ता, र त्यसपछि निको पार्ने अनुग्रह, को अरूलाई मदत, परिचालक को, भाषा को विभिन्न प्रकार, शब्दहरूको व्याख्या को र.
12:29 सबै प्रेरितहरू हुन्? सबै भविष्यवक्ताहरूलाई छन्? सबै शिक्षक हुनुहुन्छ?
12:30 चमत्कार सबै कार्यकर्ता हुन्? सबै निको अनुग्रह छन्? सबै के अन्य भाषाहरूमा बोल्न? सबै व्याख्या गर्छन्?
12:31 तर राम्रो charisms लागि जोसिलो हुन. अनि म अझै थप उत्कृष्ट तरिका तपाईंलाई प्रकट.
13:1 म मानिसहरूको भाषा बोल्न थिए भने, स्वर्गदूतहरू वा, अझै दान छैन, म एक clanging घण्टी वा प्रचंड आवाज करताल जस्तै हुनेछ.
13:2 र म भविष्यवाणी भने, र हरेक रहस्य जान्न, र सबै ज्ञान प्राप्त, र सबै विश्वास अधिकार, त्यसैले म पहाड सार्न सक्ने, अझै दान छैन, त्यसपछि म केही हुँ.
13:3 र यदि म गरीब खुवाउन क्रममा मेरा सबै सामान वितरण, र म मेरो शरीर माथि हात यदि जलाए गर्न, अझै दान छैन, यो मलाई केही प्रदान गर्दछ.
13:4 दान रोगी छ, बच्चा छ. दान ईर्ष्या गर्दैन, wrongly कार्य गर्दैन, देखावटी छैन.
13:5 दान घमन्डी छैन, आफै लागि खोजी गर्दैन, रिस गर्न सुनेपछि छैन, कुनै दुष्ट devises.
13:6 दान iniquity रमाउनुहोस् छैन, तर सत्य मा rejoices.
13:7 दान सबै पीडित, सबै विश्वास गर्छ, सबै आशा, सबै रहिरहन्छ.
13:8 दान टाढा भताभुङ्ग कहिल्यै छ, भने पनि भविष्यवाणीहरू टाढा पारित, वा भाषा बन्द, वा ज्ञान नाश.
13:9 हामी भाग मात्र थाहा, र हामी भाग मात्र अगमवाणी.
13:10 सही आउँदा तर, यस त्रुटिपूर्ण टाढा बित्दै.
13:11 म एक बच्चा थियो जब, म एक बच्चा जस्तै कुरा, म एक बच्चा जस्तै बुझे, म एक बच्चा जस्तै लाग्यो. तर म जब मानिस बन्नुभयो, म एक बच्चा को कुराहरू पन्छाएर.
13:12 अब हामी अंधेरे में एक गिलास मार्फत हेर्न. तर त्यसपछि हामी अनुहार अनुहार देख्नेछन्. अब म भाग जान्न, तर त्यसपछि मलाई थाहा पर्छ, म ज्ञात छु पनि रूपमा.
13:13 तर अहिले, यी तीन जारी: विश्वास, आशा, र दान. र यी सबैभन्दा ठूलो दान हो.
14:1 दान पछि लाग्न. आध्यात्मिक कुराहरू लागि जोसिलो हुन, तर मात्र यति तपाईं अगमवाणी सक्छ.
14:2 जसले अन्य भाषामा बोल्छ लागि, मानिसहरूलाई होइन बोल्छ, तर परमेश्वरको. कुनै एक बुझ्नुहुन्छ लागि. अझै आत्मा द्वारा, उहाँले रहस्यहरुलाई बोल्छ.
14:3 तर जसले अगमवाणी नसीहत र सल्लाह र सान्त्वना लागि मानिसहरू बोल्नुहुन्छ.
14:4 जसले अन्य भाषामा बोल्छ आफूलाई edifies. तर जसले अगमवाणी मण्डली edifies.
14:5 अब म सबै अन्य भाषाहरूमा बोल्न चाहनुहुन्छ, तर अगमवाणी गर्न थप त. उहाँले जो अन्य भाषामा बोल्छ भन्दा अगमवाणी जसले ठूलो छ लागि, सायद त्यो व्याख्या नभएसम्म, त्यसैले चर्च नसीहत प्राप्त गर्न सक्छ कि.
14:6 तर अब, भाइहरूले, यदि मैले अन्य भाषामा बोल्ने तपाईं आउन थिए, यो तपाईं कसरी लाभ उठाउन हुनेछ, बरु नभएसम्म म प्रकाश तपाईं कुरा, वा ज्ञान, वा भविष्यवाणी मा, वा सिद्धान्त मा?
14:7 पनि ती कुराहरू एक प्राण ध्वनि बनाउन सक्छ बिना छन् कि, यो एक हावा वा stringed साधन छ कि छैन भनेर. तर तिनीहरूले ध्वनि भित्र एक अन्तर प्रस्तुत नगरेसम्म, यसलाई जो पाइप हो र स्ट्रिङ हो जो कसरी ज्ञात हुनेछ?
14:8 जस्तै, को बिगुल एक अनिश्चित ध्वनि गरे भने, जो आफूलाई युद्धमा लागि तयार हुनेछ?
14:9 त्यसैले यो पनि तपाईं संग छ, तपाईं सादा बोली मा जिब्रो संग दलदल नभएसम्म लागि, यो भने के कसरी ज्ञात हुनेछ? त्यसपछि लागि हावा मा बोल्ने हुनेछ.
14:10 यस संसारमा भाषाहरूको त विभिन्न प्रकारका छन् कि विचार, र अझै कुनै आवाज बिना छ.
14:11 त्यसैले, यदि म आवाजको प्रकृति बुझ्दैनन्, त्यसपछि म बोल्ने छु जसलाई संग एक एक विदेशी जस्तै हुनेछ; र उहाँले गर्ने कुरा छ मलाई एक विदेशी जस्तै हुनेछ.
14:12 त्यसैले यो पनि तपाईं संग छ. र तपाईं आध्यात्मिक छ के को लागि जोसिलो भएकोले, चर्च को नसीहत खोजी, तपाईं प्रशस्त गर्न सक्छ भन्ने त.
14:13 यस कारण, पनि, जसले अन्य भाषामा बोल्छ, उसलाई व्याख्या लागि प्रार्थना गरौं.
14:14 त्यसैले, मैले अन्य भाषामा प्रार्थना यदि, मेरो आत्मा प्रार्थना, तर मेरो मन फल बिना छ.
14:15 के अर्को छ? म आत्माको प्रार्थना गर्नुपर्छ, र पनि मन संग प्रार्थना. म आत्माको भजनमा गाउन गर्नुपर्छ, र पनि मन संग भजनमा कविता भन्नु.
14:16 अन्यथा, यदि तपाईं आत्माको मात्र आशिष् छ, कसरी कसैले गर्न सक्छन्, अज्ञानता को एक राज्य मा, तपाईंको आशीर्वाद एउटा "आमिन" थप्न? लागि उहाँले तपाईं भनिरहेका छन् के थाहा छैन.
14:17 यस मामला मा, पक्कै पनि, तपाईं राम्रो धन्यवाद दिन, तर अन्य व्यक्ति edified छैन.
14:18 म तपाईं को लागि अन्य भाषाहरूमा बोल्न भनेर मेरो परमेश्वरलाई धन्यवाद.
14:19 तर चर्च मा, म मेरो मन देखि पाँच शब्द बोल्न रुचि, म अरूलाई पनि निर्देशन ताकि, अन्य भाषामा दस भन्दा हजार शब्द.
14:20 भाइहरूलाई, छोराछोरीको मन लागि चयन छैन. बरु, शिशुहरू जस्तै अरुको अहित गर्ने इच्छा मुक्त हुन, तर आफ्नो मन परिपक्व हुन.
14:21 यो व्यवस्थामा लेखिएको छ: "म अन्य भाषामा र अन्य ओठ यो मान्छे कुरा हुनेछ, र पनि यति, तिनीहरूले मलाई पालन गर्नेछ, प्रभु भन्छन्। "
14:22 अनि त, अन्य भाषामा चिन्ह हो, विश्वासीहरूलाई लागि, बेग्लै विश्वास तर; र भविष्यवाणीहरू बेग्लै विश्वास लागि छैन, विश्वासीहरूको लागि तर.
14:23 त्यसपछि भने, सम्पूर्ण चर्च रूपमा सँगै भेला थियो, र सबै यदि अन्य भाषामा बोल्न थिए, र त्यसपछि नजान्ने वा बेग्लै धर्म मान्ने व्यक्ति प्रवेश थिए, तिनीहरूले तपाईंलाई पागल थिए भन्नुहुन्छ छैन?
14:24 तर सबैले अगमवाणी यदि, र नजान्ने वा बेग्लै धर्म मान्ने हो जो एक प्रवेश, उहाँले यो सबै द्वारा विश्वस्त हुन सक्छ, किनभने त्यो सबै बुझ्नुहुन्छ.
14:25 आफ्नो हृदयको रहस्य त प्रकट गर्दै. अनि त, झर्ने आफ्नो अनुहार, उहाँले परमेश्वरको पुजा गर्नु हुनेछ, परमेश्वरले तपाईंलाई बीचमा साँच्चै छ भनेर घोषणा.
14:26 के अर्को छ, भाइहरूले? जब तपाईं सँगै भेला, हरेकले एक भजन हुन सक्छ, वा सिद्धान्त, वा प्रकाश, वा भाषा, वा व्याख्यालाई, तर गरौं सबै नसीहत लागि गरिन.
14:27 जो कोहीले अन्य भाषामा बोल्ने छ भने, हुन मात्र दुई त्यहाँ गरौं, वा बढीमा तीन, र त्यसपछि बारी मा, र कसैले व्याख्या गरौं.
14:28 तर त्यहाँ छ भने कुनै एक व्याख्या गर्न, उहाँले चर्च मा मौन रहनुपर्छ, त्यसपछि उहाँले परमेश्वरको एक्लै हुँदा बोल्न सक्छ.
14:29 र अगमवक्ताहरूलाई बोल्न दिनुहोस्, दुई वा तीन, र अरूलाई बुझ्न गरौं.
14:30 तर त्यसपछि, केही अर्को प्रकट गरिएको छ भने जो बसिरहेका छ, पहिलो मौन होस्.
14:31 लागि एक समयमा एउटा अगमवाणी गर्न सक्षम सबै छन्, सबै सिक्न सक्छ र सबै प्रोत्साहन हुन सक्छ भनेर.
14:32 अगमवक्ताहरूमा आत्माहरूलाई लागि अगमवक्ताहरू विषय हो.
14:33 र परमेश्वरको dissension को छैन, तर शान्ति, म पनि सन्तहरू सबै चर्चमा सिकाउन जस्तै.
14:34 महिला चर्चमा मौन हुनुपर्छ. यसलाई तिनीहरूलाई बोल्न लागि अनुमति छैन; तर सट्टा, तिनीहरूले अधीनस्थ हुनुपर्छ, व्यवस्था पनि भनेअनुसार.
14:35 र तिनीहरूले केहि सिक्न चाहन्छन् भने, उनलाई घर मा आफ्नो पति सोध्न गरौं. एक महिला चर्च बोल्न लागि लागि यो लज्जाजनक छ.
14:36 त्यसैले अब, परमेश्वरको वचन तपाईं अगाडि बढ्न गर्नुभयो? वा एक्लै तपाईंलाई पठाएको थियो?
14:37 कुनै एक अगमवक्ता वा आध्यात्मिक व्यक्ति जस्तो देखिन्छ भने, उहाँले जो म तिमीहरूलाई लेख्दै छु यी कुराहरू बुझ्न गर्नुपर्छ, यी कुराहरू प्रभुको आज्ञा हो कि.
14:38 जो कोहीले यी कुराहरू पहिचान गर्दैन भने, उहाँले पहिचान गर्नुपर्छ.
14:39 अनि त, भाइहरूले, अगमवाणी गर्न जोसिलो हुन, र अन्य भाषामा बोल्ने निषेध छैन.
14:40 तर गर्छन् सबै आदरपूर्वक र उचित आदेश अनुसार गरिन.
15:1 र त म तपाईंलाई प्रकट, भाइहरूले, म तपाईंलाई प्रचार गर्ने सुसमाचार, जो तपाईं पनि प्राप्त, र जो मा तपाईं खडा.
15:2 सुसमाचारको द्वारा, पनि, तपाईं सुरक्षित भइरहेको छ, मैले तिमीहरूलाई प्रचार कि समझ होल्ड यदि, तपाईं व्यर्थमा विश्वास नत्र.
15:3 म तपाईंलाई मा हस्तान्तरण लागि, सबै को पहिलो, के म पनि प्राप्त: ख्रीष्ट हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो कि, धर्मशास्त्र अनुसार;
15:4 र उहाँले गाडे कि; र उहाँले तेस्रो दिन फेरि उठ्नुभयो कि, धर्मशास्त्र अनुसार;
15:5 र उहाँले Cephas देखेको थियो, र एघार द्वारा पछि.
15:6 अर्को उहाँले एक समयमा पाँच अधिक सय भाइहरू देखेको थियो, जसलाई धेरै रहने, पनि वर्तमान समय, हुनत केही सुतेका छन्.
15:7 अर्को, उहाँले जेम्स देखेको थियो, त्यसपछि सबै प्रेरितहरूको द्वारा.
15:8 र सबै को अन्तिम, उहाँले मलाई द्वारा पनि देखेको थियो, म गलत समयमा जन्म भने थिए कसैले.
15:9 म प्रेरितहरूको को कम से कम छु. म एक प्रेरित भनिन्छ गर्न योग्य छैन, किनभने म परमेश्वरको चर्च खेदो.
15:10 तर, परमेश्वरको अनुग्रहको द्वारा, म के म हुँ. र मलाई आफ्नो अनुग्रह खाली भएको छैन, पछि म ती सबै भन्दा बढी प्रशस्त मात्रामा labored छ. अझै यो म होइन, तर मलाई भित्र परमेश्वरको अनुग्रहको.
15:11 यसलाई म वा तिनीहरूले छ कि छैन भनेर लागि: त्यसैले हामी प्रचार, र त तपाईं विश्वास छ.
15:12 अब भने ख्रीष्टको प्रचार गरिएको छ, उहाँले मरेका फेरि गुलाब कि, तपाईं कसरी बीचमा केही त्यहाँ मरेका कुनै पुनरुत्थानको छ भनेर भन्न छ कि यो छ?
15:13 यदि त्यहाँ मरेका कुनै पुनरुत्थानको छ लागि, त्यसपछि ख्रीष्ट पुगेको छैन.
15:14 र यदि ख्रीष्ट पुगेको छैन, त्यसपछि हाम्रो प्रचार बेकारी छ, र आफ्नो विश्वास पनि बेकारी छ.
15:15 त्यसपछि, पनि, हामी परमेश्वरको झूटो साक्षी हुन फेला हुनेछ, किनभने हामी परमेश्वरको विरुद्धमा गवाही दिइएको थियो, उहाँले खडा ख्रीष्टको थियो भन्दै, उहाँलाई खडा गरेको थियो जब, यदि, साँच्चै, मरेका जीउँदो छैन.
15:16 यदि मरेको जीउँदो छैन लागि, त्यसपछि न ख्रीष्ट फेरि पुगेको छ.
15:17 तर यदि ख्रीष्ट पुगेको छैन, त्यसपछि आफ्नो विश्वास व्यर्थ छ; लागि अझै पनि आफ्नो पापको मा हुनेछ.
15:18 त्यसपछि, पनि, ख्रीष्टमा सुतेका भएकाहरूलाई perished थियो.
15:19 हामी यो जीवनको लागि ख्रीष्टमा आशा छ भने मात्र, त्यसपछि हामी सबै मानिसहरू भन्दा अधिक दुखी छन्.
15:28 र सबै कुरा उहाँलाई subjected हुनेछ गरिएका गर्दा, त्यसपछि पनि छोरा त्यसलाई सबै कुराहरू subjected गर्ने एक subjected गरिनेछ, परमेश्वरले सबै सबै मा हुन सक्छ भनेर.
15:29 अन्यथा, के ती जो मरेको डु लागि बप्तिस्मा छन् हुनेछ भइरहेको, यदि मरेको सबै जीउँदो छैन? त्यसपछि किन तिनीहरूले लागि बप्तिस्मा छन्?
15:30 किन पनि परीक्षाहरू सहन हामीले हरेक घण्टा?
15:31 दैनिक म मर्न, आफ्नो घमण्ड गराई को माध्यम द्वारा, भाइहरूले: तपाईं म हाम्रा प्रभु ख्रीष्ट येशूमा छ जसलाई.
15:32 यदि, मानिस अनुसार, म एफिससमा मा जन्तुहरूसित संग लडे, मलाई कसरी लाभ उठाउन हुनेछ, यदि मरेको जीउँदो छैन? "हामीलाई खान र पिउन गरौं, भोलिको लागि हामी मर्नेछन्। "
15:33 के हराउनु नेतृत्व हुन. दुष्ट संचार राम्रो नैतिकता corrupts.
15:34 सचेत हुन, तपाईं बस व्यक्तिहरूलाई, र पाप गर्न इच्छुक छैन. केही व्यक्तिका लागि परमेश्वरको एउटा अज्ञानता छ. म आदर तपाईं यो भन्न.
15:35 तर कसैले भन्न सक्छ, "मरेका वृद्धि कसरी फेरि के?"वा, "तिनीहरूले संग शरीर कस्तो प्रकारको फिर्ता गर्छन्?"
15:36 कसरी मूर्ख! के तपाईं छर्न ब्यूँताउन सकिँदैन, यो पहिलो मृत्यु नभएसम्म.
15:37 र के तपाईं छर्न छैन भविष्यमा हुनेछ कि शरीर छ, तर एक खुला अन्न, गहुँ को जस्तै, वा केही अन्य अन्नको.
15:38 परमेश्वरले आफ्नो इच्छा अनुसार एक शरीर दिनुहुन्छ लागि, र प्रत्येक बीउ गरेको उचित शरीर अनुसार.
15:39 सबै शरीर नै शरीर छ. तर एक मानिसहरूको साँच्चै छ, अर्को साँच्चै जनावरहरु को छ, अर्को चरा को छ, र अर्को माछा को छ.
15:40 पनि, त्यहाँ स्वर्गीय शरीर र पार्थिव शरीर हो. तर एक समय, पक्कै पनि, स्वर्गमा महिमा छ, अन्य पृथ्वी महिमा छ.
15:41 एक सूर्य को चमक छ, चन्द्र को अर्को चमक, र अर्को ताराहरू को चमक. पनि तारा लागि चमक मा तारा भिन्न.
15:42 त्यसैले यो मृत पुनरुत्थान पनि छ. के भ्रष्टाचार मा छरिएको छ अविनाशलाई गर्न उठ्नेछ पर्छ.
15:43 अनादर के छरिएको छ महिमा गर्न उठ्नेछ पर्छ. के कमजोरी मा छरिएको छ शक्तिमा वृद्धि गर्नेछ.
15:44 आध्यात्मिक शरीर के जनावरको शरीर संग छरिएको छ उठ्नेछ पर्छ. यदि एउटा पशु शरीर छ, आध्यात्मिक एक पनि छ.
15:45 जसरी यो पहिलो मानिस भनेर लेखिएको थियो, आदम, एक जीवित प्राण संग गरिएको थियो, त्यसैले अन्तिम आदम आत्मा संग गरिनेछ जीवन फिर्ता ल्याए.
15:46 त्यसैले के छ, सुरुमा, आध्यात्मिक छैन, तर पशु, अर्को आध्यात्मिक हुन्छ.
15:47 पहिलो मानिस, पार्थिव हुनुको, पृथ्वीको थियो; दोस्रो मानिसले, स्वर्गीय हुनुको, स्वर्गको हुनेछ.
15:48 रूपमा पृथ्वी जस्तै हो यस्तो कुरा पार्थिव छन्; र यस्ता कुराहरू आकाश जस्तै हुन् स्वर्गीय छन्.
15:49 अनि त, पार्थिव छ के हामी को छवि लगे गरेझैं, के स्वर्गमा छ हामीलाई पनि छवि ले.
15:50 अब म यो भन्न, भाइहरूले, किनभने मासु र रगत छैन परमेश्वरको राज्यको अधिकार गर्न सक्षम छ; न के incorrupt छ पाउनेछ के बिग्रेको छ.
15:51 हेर, म तपाईंलाई एउटा रहस्य बताउन. पक्कै पनि, हामी सबै जीउँदो पर्छ, तर हामी सबै छैन कायापलट गरिनेछ:
15:52 एक क्षण मा, एक आँखा को twinkling मा, पछिल्लो बिगुल मा. को बिगुल लागि आवाज हुनेछ, र मृत अप उठ्नेछ, incorruptible. र हामी परिवर्तन गरिनेछ.
15:53 त्यसैले, यो corruptibility incorruptibility संग ढाकिएको गर्न को लागि यो आवश्यक छ, र यो मृत्युदर लागि अमरता संग ढाकिएको गर्न.
15:54 र यो मृत्युदर अमरता संग ढाकिएको छ जब, त्यसपछि लेखिएको थियो कि शब्द उत्पन्न गर्नेछ: "मृत्यु अप विजयमा swallowed छ।"
15:55 "हे मृत्यु, आफ्नो विजय कहाँ छ? हे मृत्यु, तपाईंको चिल्नु कहाँ छ?"
15:56 अब मृत्युको चिल्नु पाप हो, र पापको शक्ति व्यवस्था हो.
15:57 तर धन्यवाद परमेश्वरको हुन, जो हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट मार्फत हामीलाई विजय दिनुभएको छ.
15:58 अनि त, मेरो प्यारो भाइ, स्थिर र अटल हुन, प्रभुको काममा सधैं abounding, आफ्नो श्रम प्रभुमा बेकारी छैन भनेर थाह पाउँदा.
16:1 अब सन्तहरू लागि गरिन्छ जो संग्रह विषयमा: म गलातीयामा को चर्च लागि प्रबन्ध गरेका छन् जस्तै, त्यसैले यो पनि तपाईं संग गर्नुपर्छ.
16:2 हप्ताको पहिलो दिनमा, विश्राम दिन, तपाईं आफैले देखि लिन हरेकले, के छुट्याउनु उहाँलाई राम्ररी खुसी हुनेछ, त्यसैले जब म पुग्नु कि, यस संग्रह त्यसपछि बनाइने छ छैन.
16:3 र म जब वर्तमान छु, जसलाई तपाईं अक्षर अनुमोदन गर्नेछ, यी म यरूशलेम आफ्नो उपहार सहन पठाउन पर्छ.
16:4 र यो उपयुक्त छ भने मलाई पनि जान, तिनीहरूले मलाई साथ जानेछौ.
16:5 म म्यासिडोनिया मार्फत पारित गरेपछि अब म तपाईंले भ्रमण हुनेछ. म म्यासिडोनिया पास हुनेछ.
16:6 र सायद म संग रहन हुनेछ, र पनि जाडो खर्च, त्यसैले तिमी मेरो बाटो मा मलाई नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने, जब म प्रस्थान.
16:7 म मात्र बित्दै जाँदा अहिले हेर्न इच्छुक छैन, म केही समय लम्बाइ लागि तपाईंसँग रहन सक्छ भन्ने आशा देखि, यदि प्रभु परमिट.
16:8 तर म एफिससमा मा हुनैपर्छ, पनि पेन्तिकोसमा सम्म.
16:9 एक ढोका लागि, ठूलो र हटाउन नसकिने, मलाई खोलेको छ, साथै धेरै विरोधीहरू.
16:10 अब तिमोथी आएको भने, यसलाई हेर्न उहाँले डर बिना तपाईं बीच हुन सक्छ कि. लागि उहाँले प्रभुको काम गरिरहेको छ, जस्तै म पनि के.
16:11 त्यसैले, कुनै एक उहाँलाई नाइँनास्ति गरौं. बरु, शान्ति आफ्नो बाटो मा उहाँलाई नेतृत्व, उहाँले मलाई आउन सक्छ भनेर. म भाइहरूलाई उहाँलाई प्रतीक्षा छु.
16:12 तर हाम्रो भाइ विषयमा, अपोलो, म निकै भाइहरूसँग तपाईं जान तपाईंलाई थाहा म उसलाई बिन्ती गरे कि दिँदै छु, र स्पष्ट यो समयमा जान आफ्नो इच्छा थिएन. तर उहाँले उसलाई लागि समय को एक ठाउँ बेला पुग्नु हुनेछ.
16:13 सचेत हुन. विश्वास खडा. manfully कार्य र बलियो हुन.
16:14 गर्छन् तपाईंकै हो भनेर सबै दान जोडतोडले हुन.
16:15 र म तपाईंसँग प्रार्थना गर्छु, भाइहरूले: तपाईं Stephanus घरमा थाहा, Fortunatus को र, Achaicus को र, तिनीहरूले Achaia पहिलो-फल हो कि, र तिनीहरूले सन्तहरू को सेवकाईमा गर्न आफूलाई समर्पित गरेको.
16:16 त्यसैले तपाईं यस्तो यो रूपमा व्यक्ति पनि विषय हुनुपर्छ, साथै सबै मिलेर र तिनीहरूलाई काम भएकाहरू.
16:17 अब म Stephanus र Fortunatus र Achaicus उपस्थिति आनन्दित, तपाईंलाई के अभाव थियो किनभने, तिनीहरूले आपूर्ति छन्.
16:18 तिनीहरूले मेरो आत्मा र तपाइँको ताजा छ. त्यसैले, यस्तो यो रूपमा व्यक्ति पहिचान.
16:19 एशिया को चर्च तपाईं अभिवादन. अक्वीला र प्रिस्किला तपाईं प्रभुमा निकै अभिवादन, आफ्नो घर को चर्च संग, जहाँ म पनि एक अतिथि छु.
16:20 सबै भाइहरूले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका. पवित्र चुम्बनले एक अर्को अभिवादन.
16:21 यो मेरो आफ्नै हात बाट अभिवादन छ, पावलले.
16:22 यदि जो कोहीले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रेम गर्दैन, उहाँलाई अभिशाप होस्! Maran Atha.
16:23 हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह तपाईं सबै हुन सक्छ.
16:24 मेरो दान ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरू सबै छ. Amen.